Izindaba - Isingeniso Semishini
Ukulungiswa kwemishini kuyisigaba senqubo ejwayelekile futhi ehlanganisa konke. Ukucubungula ngomshini okukhulunywe ngakho lapha kubhekisa ngqo ezindleleni zokucubungula ezisetshenziswa ekwelashweni komphumela womphezulu. Kukhona ukugqagqana okuyingxenye ngokucutshungulwa kwemishini ku- "Inqubo Yokwenza", futhi udinga ukunaka umehluko.
Kunezinhlobo eziningi zemishini. Izindlela zokucubungula zendabuko azilutho nje njengokujika, ukugaya, ukugibela amapulani, ukugaya, ukushaya isibhakela, ukusika, ukubhola, njll. Iningi lalezi zindlela zendabuko zihlanganiswa kancane kancane futhi zihanjiswe yizikhungo zanamuhla zokunemba ze-CNC. Ezinye izindlela ezintsha zobuchwepheshe ziyanothiswa kancane kancane. Isikhala sale ncwadi silinganiselwe, ngakho-ke ngeke ngibabhale bonke lapha. Ngizokhipha kuphela amasu abandakanyeka ekwakhiweni kokuklanywa ngabaqambi, njengokuqothula isihlabathi, ukudweba ngocingo, ukupholisha, ukugxusha, nokugingqa.
Izici zemishini zingafingqwa ngokuthi: isivinini esikhulu, ukusebenza kahle okuphezulu nokunemba okuphezulu.
Ngezindlela ezahlukahlukene zenqubo yokuchofoza, izici zazo ezibonisiwe zikhonjisiwe kuthebula elilandelayo:
Kungakhethwa ngokuzithandela phakathi koburhaba obuhlukile, ukuze kutholakale ubukhali obuhlukile bendawo yokusebenza
Inganciphisa ukuqina kobuso bento yokusebenza, bese uthola indawo ebushelelezi noma isibuko esicwebezelayo
Ingacubungula noma yimaphi amandla aphezulu, ukuqina okuphezulu, ukuqina okuphezulu, ukuqina okuphezulu kanye nezinto ezihlanzekile zokuziphatha okuphezulu; awekho amandla asobala womshini ngenkathi kucutshungulwa, futhi kufanelekile ukucubungula izinto zokusebenza zobunzima obuphansi nezakhiwo ezinhle
Ayikwazi nje kuphela ukuguqula iphethini yangempela yemishini noma ukushiyeka kwendawo, imboze kahle iphethini yemishini nokukhubazeka kokukhubazeka ekukhiqizeni, kepha futhi inomphumela omuhle wokuhlobisa
Insimbi, ingilazi, i-ceramic
Insimbi, i-ceramic, ingilazi
Izinto zokuqhuba ezifana nezinsimbi
Insimbi, i-acrylic, i-PC, i-PET, ingilazi
I-Sandblasting inqubo esebenzisa umoya ocindezelweyo noma amanzi ukushayela izinhlayiya ezinzima ukushaya ingaphezulu lendawo yokusebenza ngendlela esatshalalisiwe ukufeza ukuhlanzeka noma ukuqina. Izinhloso zokusebenza ezifana nokususa ukugqwala, ukumboza okokuhlanza, ukuhlanza, njll. Ngeke kuxoxwe ngakho lapha. Uhlelo lokusebenza lobuchwepheshe bokubukeka luxoxwa kakhulu lapha. Inqubo ejwayelekile ye-sandblasting isetshenziselwa ukwenza indawo ye-matte / matte / sand.
I-sandblasting ingafakwa ebusweni bawo wonke ama-workpieces afaka amapulasitiki, izinsimbi, ingilazi, izitsha zobumba, njll., Kepha okusetshenziswa kakhulu ekukhiqizweni ngobuningi ukuvela kwe-sandblasting okokusebenza kwensimbi, ikakhulukazi imikhiqizo yensimbi engagqwali nemikhiqizo ye-aluminium.
Umdwebo wocingo cishe ungenye yezinqubo ezivame kakhulu zokuhlobisa izinsimbi. Inqubo yokudweba ingabonakala kuzinsimbi, ikakhulukazi insimbi engagqwali, izinto zobumba nezinto zokwakha zepulasitiki.
Umdwebo wocingo ngokuvamile uhlanganisa ukugaya ngokomzimba, ukuqoshwa kwe-CNC ne-laser, njll. Imiphumela etholwe izindlela zokucubungula ezihlukile nayo yehluke kakhulu, futhi izindleko nazo zehlukile.
I-Rolling, ebizwa nangokuthi i-knurling, inqubo endala kakhulu. Kusetshenziswa ummese osontayo ukwengeza amaphethini wokusiza aqonde noma enetha ebusweni bezinto zokusebenza zensimbi eziyindilinga ukwandisa ukungqubuzana nokwenza lula ukusebenza. Kodwa-ke, ngezidingo zobuhle bomphakathi, i-aesthetics yenqubo iye yanda kancane kancane, futhi umsebenzi wokuhlobisa kweminye imikhiqizo mkhulu kunomsebenzi osebenzayo.
Ukuqoshwa kwe-CNC ukusetshenziswa kwe-CNC ukujika nokuqopha ebusweni bento yokusebenza. Amaphethini abhulashiwe namaCD akhiqizwayo ahlanzekile, ahlelekile futhi ajwayelekile. Le ncwadi ibizwa ngokuthi ukuthungwa kwenqubo. Ngaphezu kwalokho, imidwebo eqoshiwe ye-CNC nayo ingalawula ukujula ukuze ikhiqize imiphumela yokusiza.
Ukupholisha kubhekisa ekusetshenzisweni kwemishini, yamakhemikhali noma ye-electrochemical ukunciphisa ubukhulu bendawo yomsebenzi ukuze kutholakale indawo ekhanyayo nebushelelezi. Ukusetshenziswa kwamathuluzi wokucwebezelisa nezinhlayiyana ezilimazayo noma eminye imidiya yokupholisha ukuguqula ubuso bento yokusebenza.
Ukupholisha ngomshini kuyindlela yokupholisha ethembele ekusikeni nasekusetshenzisweni kwepulasitiki kwendawo ebonakalayo ukususa izingxenye ezi-polvex ezipholile ukuthola indawo ebushelelezi. Ngokuvamile, kusetshenziswa izinti zamatshe kawoyela, amasondo oboya, isandpaper, njll., Futhi imisebenzi yezandla iyona eyinhloko.
Indlela yokupholisha ye-ultra-precision ingasetshenziselwa izidingo zekhwalithi ephezulu. Ukupholisha kwe-Ultra-precision ukusetshenziswa kwamathuluzi akhethekile we-abrasive, acindezelwe ngokumelene nendawo esetshenzisiwe yomsebenzi wokusebenza kuketshezi lokupholisha eliqukethe ama-abrasives wokujikeleza ngejubane. Kusetshenziswa lobu buchwepheshe, ubukhulu bendawo engaphezulu kukaRa0.008μm bungatholakala, obuphakeme kakhulu phakathi kwezindlela ezahlukahlukene zokupholisha. Le ndlela ivame ukusetshenziselwa isikhunta selensi ebonakalayo.
Ukupholisha uketshezi kuncike kuketshezi olugeleza ngesivinini esikhulu nezinhlayiya ezihuqayo ezithwalwa ngalo ukugeza ubuso bento yokusebenza ukufeza injongo yokupholisha. Izindlela ezijwayele ukusetshenziswa yilezi: ukucubungula i-jet esetshenziswayo, ukucutshungulwa kwe-jet liquid, ukugaya i-hydrodynamic nokunye.
Ukugaya kwe-Hydrodynamic kuqhutshwa ingcindezi ye-hydraulic ukwenza okuphakathi kuketshezi okuphethe izinhlayiya ezinobudlova zigeleze zibuyele ngaphesheya kobuso bento yokusebenza ngejubane elikhulu. I-medium medium yenziwa kakhulu ngamakhemikhali akhethekile anokuhamba kahle ngaphansi kwengcindezi ephansi futhi ahlanganiswe nama-abrasives. Ama-abrasives angenziwa nge-silicon carbide powder.
Ukugaya nokupholisa kwe-Magnetic
Ukupholisha okunamandla okunamandla ukusebenzisa ama-abrasives kazibuthe ukwakha amabhulashi alrasive ngaphansi kwesenzo sensimu kazibuthe ukugaya lo msebenzi. Izinzuzo zayo ukusebenza kahle kokusebenza kahle, ikhwalithi enhle, ukulawula okulula kwezimo zokucubungula nezimo zokusebenza ezinhle. Usebenzisa ama-abrasives afanele, ubukhulu bendawo bungafika kuRa0.1μm.